SANN MAW: 07/01/13
Part –6How to select mobile phone network operator for Myanmar?
အပိုင်း ၅ တုန်းက ပြောခဲ့တာလေး ဆက်ရအောင်… အဲ့တုန်းက ပြောခဲ့တာမှာ.. နံပါတ် ၃ နည်း လမ်း (beauty contest) နဲ့ ရွေး တာတော့ ဟုတ်ပါပီ.. မေးစရာ ရှိလာတာက ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ က လာဘ်ယူပီး လိုင် စင် ချပေးတာမျိုး မဖြစ်အောင်..ဘယ်ပုံစံ နဲ့ ထိမ်း သိမ်း မလဲ ဆုိုတာပါပဲ.. နောက်တချက် က..အကဲ ဖြတ်အဖွဲ့က လာဘ်မစားဘူး ဆုိုရင်တောင် မှ.. အရည်အချင်း မပြည့်မှီ တဲ့ အကဲဖြတ်ချက် ရဖိုို့ဆုိုတာ..အကဲဖြတ်အဖွဲ့ မှာ..သက်ဆုိုင် ရာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပါရ၈ူတွေ ပါဖုို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ သာလျှင် မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်အကဲဖြတ်နုိုင်မှာပေ့ါနော်။ ဆုိုပါစို့.. ဖက်ရှင်မယ်ရွေးပွဲမှာ..မျက်စိမကောင်းသူတွေ.. ကာလာဘလုိုင်း ဖြစ်နေသူတွေသာပါဝင်တဲ့ အကဲဖြတ်အဖွဲ.. နဲ့ ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ ရလာဒ် ကို ရမလာနုိုင်ဘူးဆုိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။. ဒီလိုပဲ.. ခု မုိုဘုိုင်းဖုန်းလောက အတွက် လိုင်စင် ချပေးရာမှာ. နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာသုံး လုပ်ငန်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရယ်..နုိုင်ငံနဲ့ ချီပီး လုပ်တဲ့ ကိတ်စ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ရယ်..ပြည်တွင်း က လူတွေသာ ပါဝင်တဲ့.အကဲဖြတ်အဖွဲ့ ပဲသုံးမယ်ဆုိုရင်တော့.. သင့်တော် မှန်ကန်တဲ့ ရလာဒ်ထွက်လာဖုို့.
မလွယ်ဘူးထင်တယ်။ ဒါကြောင့် အစုိုးရအနေနဲ့.. အကဲဖြတ်အဖွဲ့အတွက်.. အကူအညီ နဲ့ လုိုအပ်တဲ့ အကြံဥာဏ် တွေ ရဖို့အတွက်.. ဒီိလိုနယ်ပယ်မှာ အတွေ့အကြုံ နဲ့ ကျွမ်းကျင် မှု့ ရှိတဲ့.. International Strategy Consultant အဖွဲ့ တခုခု ကို ငှားဖုို့လိုလာတယ်. ဒီနေရာမှာ လဲ.. နုိုင်ငံတကာ မှာ ဒီလို အဖွဲ့တွေက အလွန်များဆုိုတော့ ဘယ်အဖွဲ့ကို ငှားမလဲဆုိုတာ ပြသနာ က ပေါ်လာပြန်တယ်။ တော်ကြာ ခပ်ချာချာ. ရိုက်စား လုပ် နေတဲ့ ဂဂျိုးဂဂျောင် အဖွဲ့တခုကို သွားငှားမိရင်လဲ.. ငါးပါးမှောက်ဦးမယ် မဟုတ်လား။
ဒါ့ကြောင့်.. အစိုးရအနေနဲ့.. United Nations ရဲ့ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ITU လုို့ခေါ်တဲ့ international telecommunication union ဆုိုတဲ့ အဖွဲ့ ကို ဆက်သွယ်ပီး ..နုိုင်ငံတကာ က ဘယ်လိုအကြံပေး အဖွဲ့ကို ငှားရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်ကို တောင်းပါတယ်။ နောက် ITU ကနေ ထောက် ခံချက်ပေးထားတဲ့.. ဂျာမန်အခြေစိုက် Roaland Berger Strategy Consultants ဆုိုတဲ့ မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အဖွဲ့ကို ငှားလုိုက်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ ဟာ နုိုင်ငံပေါင်း ၃၆ နုိုင် ငံ မှာ ရုံးခွဲပေါင်း ၅၁ ခု နဲ့ ၁၉၆၇ ကတည်း က လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပီး .. ၂၀၀၉ ခုနှစ် စာရင်းအရတနှစ် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၈၅၀ ရှိတဲ့ International Company တခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ ရတယ်။ နောက် နုိုင်ငံတကာမှာလဲ ဒီအဖွဲအစည်း ဟာ သူ့နယ်ပယ်နဲ့ ပါတ်သက်ရင်..ထိပ် ဆုံး နံပါတ် ၄ နေရာမှာ ရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီလင့် http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Berger_Strategy_Consultants မှာ သွားကြည့်နိင်ပါတယ်။ ဒါက ITU ရဲ့လင့် http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx ပါ။
ဒါတွေကို ဘာကြောင့် ပြောရတာလဲဆုိုရင်.. ဒီလုို့ United Nations လက်အောင် ခံ အဖွဲ့အစည်း ITU တို့.. Roland Berger Strategy Consultants တုို့အနေနဲ့.. လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိတ်စ မှာ ပါဝင် ပါတ်သက်မိတယ်ဆုိုရင်. ရတာနဲ့ ဆုံးရှုံးတာ မကာမိအောင်.. နာမည်ပျက်ပီး.ရေရှည် လုပ်စားလို့.. မဖြစ်နုိုင်ကြောင်း စဉ်းစားလုို့ရနိင်ပါတယ်။ တော်ရုံ တန်ရုံ ငွေကြေးပမာဏ နဲ့တော့ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆွယ်လုို့မရလောက်ဘူးလို့ ကျုပ်ကတော့ ထင်တယ်ဗျ။
ဟုတ်ပီး ဒီအဖွဲ့ကို ငှားပီးတော့ ဘာဆက်လုပ်လဲ ဆုိုတော့ ဒီအဖွဲ့ နဲ့ .. မြန်မာ ပြည်က အကဲဖြတ်အဖွဲ့နဲ့ တုိုင်ပင် ညှိနုိုင်းပီး .. မြန်မာပြည်အတွက်.. tender တင်သွင်းရာမှာ သိသင့် တဲ့ အချက် အလက်တွေ။ အကဲဖြတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်မယ့် အကဲဖြတ်ချက် အဆင့် ဆင့်တွေ၊ အမှတ်ပေး စည်းမျည်းတွေကို ထုတ်ပြန်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက် အဆင့်ဆင့် နဲ့ အကဲဖြတ်ချက် အမှတ်ပေးစည်းမျည်းတွေနဲံပါတ်သက်လို့ နောက် တပိုင်း ဆက်ကြတာပေါ့။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ နောက် မြန်မာပြည်အတွက် တခု ကောင်းသွားတာက.. ဒီလိုမုိုဘိုင်းဖုန်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုင်စင် ချမပေးခင်လေးမှာပဲ..အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေး လောကမှာ ဆင်းကဒ် ဈေးအလွန်ကြီးတဲ့ ကိတ်စ ကနေစပီး..မီးခိုးကြွက်လျှောက် နဲ့ လိုက်ပီး..ဝန်ကြီး ကအစ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိကြီး အတော်များများ အလုပ်ပြုတ်သူပြုတ်..ရာထူးကျသူကျ ဖြစ်ခဲတာ မှတ်မိဦးမယ် ထင်တယ်.
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ရှိလာပီး.. လွတ်လပ်တဲ့ တရားမျှတတဲ့ လိုင်စင် ချပေး တယ်လုို့ ယူဆရတဲ့ အခင်းအကျင်း ဖြစ်လာတာဟာ . ကျုပ်စိတ်ထင်..ဒီလိုဖြစ်ခဲတဲ့ အရှိန်လေးကြောင့်လဲ ပါမယ်ဗျ. ဝန်ကြီးတွေ.. အရာရှိကြီးတွေ တော်တော်များများ ပြသနာ တက် ထားတာ သိပ်မကြာသေးဘူးဆုိုတော့.. နောက် လူကလဲ..ဘာပဲ ပြောပြော အနဲနဲ့ အများ တော့ လုပ်ချင်တုိုင်း မလုပ်ရဲဘူးလို့ယူဆရတာပဲ.. နုိုင်ငံတော် သမတကိုယ်တုိုင် ပါဝင်ပါတ်သက် တာရယ်.. လူအတော်များများစိတ်ဝင်တစား စောင့် ကြည့်နေတာ ကလဲ တကြောင်း..အကြောင်းကြောင်း သော အကြောင်းတွေကြောင့်.. ခု လုိုင်စင် ချပေးတဲ့ ကိတ်စ ဟာတော့ဖြင့်.. ဘက်လိုက်မှူ့နဲ့ ကင်းလွတ်တယ်လို့ ကျုပ်ကတော့ အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် ယူဆမိပါတယ်။
Posted by Admin at Monday, July 01, 2013 1 comments
Part –6How to select mobile phone network opera...